Otu esi ebuli Debian 10 Buster gaa na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi ebuli Debian 10 Buster gaa na Debian 11 Bullseye
August 22, 2021 July 26, 2021 by Jọshụa James
Jiri Bullseye kwalite Debian Buster Repo
Nweta nkwalite gaa na Debian 11 site na iji iwu ọnụ
Kwenye nkwalite Debian 11 Bullseye
Na-ehicha ngwugwu Debian 10 adịgboroja
Ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia
Ọhụrụ na-abịa ntọhapụ nke Debian 11 akpọrọ aha Bullseye a na-eme atụmatụ ịhapụ ya August 14, 2021. Nkwalite a na-anwale kemgbe afọ ole na ole gara aga na-eweta mmelite na ọtụtụ ngwungwu amara ama dị ka nkwalite LibreOffice ka ọ bụrụ ụdị 7.0, ịkwalite GNUcash gaa na 4.4, yana nyocha na mbipụta ọhụụ na-enweghị ọkwọ ụgbọ ala n'etiti ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ.
Debian 11 na-akwado ihe owuwu ndị a:
32-bit PC (i386) na 64-bit PC (amd64)
64-bit ARM (aka 64)
ARM EABI (ogwe aka)
ARMv.7 (EABI hard-float ABI, armhf)
MIPS dị obere (mipsel)
64-bit obere-endian MIPS (mips64el)
64-bit obere-endian PowerPC (ppc64el)
Sistemụ IBM z (s390x)
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi ebuli Debian 10 Buster gaa na Debian 11 nke ọma.
OS akwadoro: Debian 10 Buster
Tupu ịkwalite gị Debian 10 Buster Sistemu eji arụ ọrụ, ọ dị mma ijide n'aka na ọ dị ọhụrụ site na iwu njedebe a:
Tupu ịga n'ihu, jiri ya CAT iwu ịhụ ụdị Debian ị nwere ugbu a:
Mara, ị nwere ike iji otu iwu ahụ ka emechara nkwalite zuru oke na Bullseye iji nyochaa mmelite ahụ.
Tupu ịkwaga n'akụkụ nke nkuzi ahụ, jide n'aka na ị nwere ike ịnweta su iwu (mgbọrọgwụ).
Iji banye na mgbọrọgwụ jiri iwu a:
Ọzọ bụ imelite ihe Debian 10 Buster ebe nchekwa na Nnenna 11 Bullseye ebe nchekwa iji budata na nweta mmelite. Nke a kwụ ọtọ.
Mbụ, meghee site na iji nano editọ ederede (sources.list) nhazi faịlụ:
Ugbu a ị chọrọ kwuo okwu ndenye niile dị maka Debian Buster, na nke a na-eme site na-agbakwụnye (#) na mmalite ahịrị ọ bụla dị ka ihe atụ n'okpuru:
Ugbu a na ị kwuru si na (nkwụ ụgwọ HTTP) na (deb-src) Debian Buster repositories, tinye na njedebe nke faịlụ ahịrị ndị a ka ịgbakwunye Debian 11 Bulleye repository dị ka ndị a:
Ka ịchekwaa faịlụ na ndezi ederede nano, pịa njikọ dị na ahụigodo gị (CTRL+O) ịchekwa (CTRL+X) ka ị pụọ na ndezi ederede.
Mara, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka alaka ụlọ ọrụ nnwale wụnye ngwungwu kachasị ọhụrụ site na mgbago elu, tinye ahịrị ndị a na nke gị. isi mmalite.list faịlụ n'elu:
Nke a agaghị egbochi gị nkwalite Debian 11 nkịtị, ọ bụkwa maka ntụnye aka n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ihe dịka desktọpụ Gnome 40 ọhụrụ, wdg.
Nke a bụ nhọrọ 100% na ekwesịrị ịgbakwunye naanị ma ọ bụrụ na i bu n'obi iji njirimara ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ imelite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta mgbanwe ọhụrụ wee mee iwu zuru oke (mmelite zuru oke) iwu ọnụ ka ịmalite usoro nkwalite dịka ndị a:
ụdị (NA) ịga n'ihu na nwụnye.
N'oge echichi, ị ga-ezute mmapụta nwere mgbanwe (apt-list). Ka ịga n'ihu wee pụọ na ihuenyo a, pịnye (Ajụjụ):
Na-esote, mmapụta ọzọ ga-ajụ ma ị ga-achọ ịmalitegharị ọrụ ahụ n'oge usoro nkwalite. Azịza nke ndabara bụ mba. Agbanyeghị, ọ ga-akacha mma ma ị họrọ ee. Họrọ ọrụ gị wee pịa ya Tinye igodo iji gaa n'ihu:
Ị ga-achọ ijide n'aka na ihuenyo adịghị ekpochi ma ọ bụ n'ime ọnọdụ ụra n'oge usoro nkwalite. Ọzọkwa, mepụta faịlụ ọ bụla dị mkpa ị na-enweghị ike imeli ida.
Usoro nkwalite kwesịrị iwere nkeji 5 ruo 10, dabere na ngwaike sistemụ yana njikọ ịntanetị.
Ozugbo emechara, a na-adụ ọdụ ka ịmalitegharịa sistemụ Debian gị n'ihi na ọtụtụ mgbanwe ọhụrụ chọrọ ka nke a rụọ ọrụ. Pịnye iwu ọnụ ọnụ iji nweta nke a:
Ugbu a usoro nkwalite ahụ agwụla, ezigbo echiche ga-abụ ịlele iwu CAT ọzọ dịka mmalite nke nkuzi iji hụ ụdị ọrụ Debian wee wuo dị ka ndị a:
Ihe atụ na-akwado nkwalite ahụ:
Echiche dị mma bụ ihicha sistemu Debian 11 gị site na iwepu ngwungwu ochie nke na-ahapụ ugbu a na nkwalite gị na-aga nke ọma ma ọ dịghị mkpa ọzọ.
Ị ga-eme nke a na (autoremove) nye iwu dika ndi a:
Ụfọdụ akụkọ apụtala nke ndị ọrụ nwetara nsogbu nkwalite na ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia. A na-adụ ọdụ ka ị wepụ ihe ndị a dị ka ndị a:
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi kwalite sistemụ arụmọrụ Debian 10 Buster gị na Debian 11 Bullseye. Dịka ekwuru na mmalite ntuziaka ahụ, Bullseye anọghị n'ọchịchị ka kwụsie ike mana ọ ga-abụ n'August.
N'ozuzu, ọhụrụ Debian Bullseye nwere nnukwu nkwalite nke nyere ogologo oge n'etiti Debian kwụsiri ike ịbụ 2 afọ ọkọlọtọ. Ị ga-ahụ ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na nkwalite na ọtụtụ ngwugwu.
N'adịghị ka nkesa Linux ndị ọzọ, klaasị Debian n'onwe ya dị ka nkwụsi ike n'ihe niile, yabụ na ọ bara uru oge ịme. I kwesịghị izute ọtụtụ ahụhụ ọbụlagodi na ntọhapụ ahụ bụ nke ọhụrụ, ebe ọ na-anwale ule ogologo oge.
Lelee atụmatụ ndị ọzọ na ihe dị ọhụrụ na Debian 11 Bullseye, wee lelee onye ọrụ gọọmentị Isi ihe ntọhapụ Debian.
Categories Debian Tags Debian 10 Buster, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo
Otu esi etinye LEMP Stack (Nginx, MariaDB, na PHP) na Rocky Linux 8
Otu esi etinye Elasticsearch na Debian 11 Bullseye